Waakuma Xasan Cali kheyre? Baladxaawo Iyo khilaafka Baarlamaanka Maxuu salka ku hayaa? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho (Mareeg News )Waxaa lawada ogaa in reiisaul-wasaaraha dalka mudane xasan cali kheyre 28kii bishii February uu safar aan la ogeyn ujeedadiisa uu ugu ambabaxay dalka isutagga imaaraadka carabta,(waxaa la xaqiijiyay in paasport ka raisul wasaare kheyre uu yiil safaradda imaaraadka muddo isbuuc ah ka hor safakiisa dubai), waxaana safarkiisii dubai ku wehliyay wasiiro katirsan xukuumaddiisa, Raisul wasaare kheyre waxaa uu Dubai kula soo shiray saraakiil sar sare oo ah kuwa ka arimiya boqortooyada dalkaas, waxaana sida ay weeklies daabacday halkaas lagu soo kala saxiixday heshiis 4geesood ah oo ay kala saxiixdeen, dowladda soomaaliya oo uu matalayay xasan cali kheyre, dowladda imaaraadka oo ay wakiil u ahayd hey’adda DP-world, dowladda soomaaliland uu mathalayay wasiirka arimaha dibadda, iyo dowladda Ethiopia, inkastoo heshiiska sida lasoo bandhigay uu ahaa 3geesood(Ethiopia, Somaliland,iyo DP-world), waase qarsoonaa oo daaha gadaashiisa la mariyay heshiis uu kheyre dowladahaas kula soo galay Dubai.
Mudane kheyre waxaa garoonka muqdishu looga hor geeyay warqaddii wasaaradda dekadaha, balse raiisul wasaare kheyre uma furneyn waddo aan ka ahayn waxa uu sameeyay oo ahayd cambaareyn iyo in heshiiskii DP-world uu kula soo galay dubai uu xaaraan ka dhigo, waxa uuna sheegay in aan loo dul-qaadan Karin, tahayna arin masiiri ah oo ay waajib tahay in wax laga qabto fara-gelintaas qaawan ee shirkadaha ay la gelayaan maamuladda, inkastoo uusan Xusin magaca shirkadda DP-World.
wasiirkii Arimaha Gudaha Iyo dib u hishiisiinta Abdi Faarax saciid Juxa Ayaa asigana xilka laga qaaday kadib markuu tagay xuud Beenaadka U dhaxeya kenya iyo somalia gaar ahaan magaalada baladxaawo, Wasiir juxa oo dadka degaanka baladxaawo u sheegay in ay dowlada ka war heyso Lana aqbaleen kala goynta walaalaha baladxaawo dowlada ay talaabo ka qaadi doonta arinka Dirbiga Kenya ay dhisooso.
maxaa ka socda Dhulka somalida Ay kenyaanka xooga ku heystaan?
Shirkado shidaal oo ay kamid tahay shirkada shel ayaa Sahmin shidaal ka wada aaga soomali keenya wasiir juxa waxaa xilka laga qaaday kadib marka loo arkay inuu caqabd ku yahay howlaha shidaal baarista. Sidoo kale Dirbiga Baladxaawo waxuu ku qotomaa biyaha soomaliya ee shidaalka ku jiro oo ay dowladii hore dacwad uga socotay maxkamada caalamiga.
gobolka waqooyi galbeed somaliand waxaa iyana shidaal baaris ka wada Shirkada germny laga leeyahay ugu danmbeeyn waxaa bilaha soo socda la filayaa dhulka puntland iyana inuu ka bilaawdo.
xasan cali kheyre waxaas dhan waxuu ku leeyahay Saami dhan 34%.